Muzamil Cabdi Cusmaan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ganacsi waliba si wanaagsan buu u shaqeynayaa haddii dhaqaalaha dalka uu yahay mid xasilan, si kale aan u dhigee qiimaha kala gadashada badeecadda waa in aysan kordheynin, tirada shaqo la’aanta dalkana waa ay yartahay, Dhaqaalaha dalkana waa in uu si tartiib tartiib ah u kobco. Dowladana waa in ay sameyso nidaam ay ku xakameyn karto kuna xasilin karto Dhaqaalaha Dalka. Nidaamyadan dhaqaale oo ay dowlada isticmaasho ayaa fursado badan siin kara Ganacsiyada, Ganacsata iyo Dalka waxa ayna xamayn karaan talaabo waliba oo lidi ku ah Xasilooni darada Dhaqaalaha Dalka. 2008 – 2009, Waddamo fara badan ayaa waxaa ku dhuftay …
Doorka ay waalidiinta ku leeyihiin nolosha ardayga lama soo koobi karo. Waalidiintu waa aasaaska iyo tiirka ay dushooda guusha ardaygu ka bilaawan karto. Inkastoo waxbarashada nidaamiga ahi ay ka bilaabato iskuulka, waxbarashada dhabta ah waxa ay ka bilaabataa guriga iyo nawaaxigiisa. Guryuhu waxay dhisaan dabeecadeena, dhaqankeena iyo garashadeena. Taariikhdaada guriga waxa ay go’aan ka gaari doontaa markaad weynaato inaad noqoneysid mid isku kalsoon, dadaal badan, masuulna ah. Ama inaad noqoto mid caro badan iyo nid aan isku filnayn. Muddo dheer ka hor inta aanu canugu bilaabin iskuulku waa inay ku shubaan caruurtooda qiimaha waxbarashada. Taageerada iyo ku lug lahaashaha …
Is-jufeysiga, nin jecleysiga iyo qabiil ku faanka, ku tagri falida awoodeed ee dowlada, jagoon sare oo sida indho beelka loo magacaabaya, saraakiisha magac u yaalka oo lagu raali galinayo beelo gaar ah digreeetana lagu soo saaraya waxa ay horseeday in kheyraadkii dalka in koox magac gaar ah la baxaday ay ku dheefsadaan dadka kalana ay ka qadsoon yihiin waxaa intaasi dheer taladii dalkana ay koox dan guud aan wadin gacanta u gashay. Abwaan cabdulle raage taraawiil oo cabirayey dareenka dadkii lagu dulmiyey dalka, cadaalad daridana iftiiminayey ayaa ku maansooday sidan:- – Qof u yaal wixii loo diroba qaabilaan ahayee …
Sida lawada ogyahay wadamada hormay oo ay ka jirto Dowlado madaxdeeda ku imaanayaan nidaam doorasho oo qof iyo cod ah waxaa ka jira waxa lagu magacaabo Xisbi Siyaasadeed, sidaa darteed halkan waxaan kusoo gudbinayaa waxa la dhaho Xisbi Siyaasadeeed! Xisbi Siyaasadeed waa Urur dad ah oo isu yimid, kuwaas oo leh fikrad iyo aragti guud ay ku maamulaan Dalka iyo Dadka. Xisbi waliba waxa uu isku dayayaaa in uu ku guuleysto hanashada talada dalka asagoo u maraya nidaam doorasho oo is-ogol ah, markii ay timaado loolan doorasho xisbi waliba waxa uu xooga saarayaa in uu helo codada ku filan …
Inaad dhanka wanaagsan u fakartid (thinking positively), micnaheedu waa in aad qof rajo wanaagsan leh tahay (optimist). Waa in aad aaminsangahay inaad sameyn karto waxkasto oo aad naftaada ku taxluujisid. Dadka dhanka wanaagsan u fikira waxay horumar ka gaaraan nolosha ayagoo qaba mowqifka ah in waxkasta ay suurto-gal yihiin. Inay dhaqaajin karaan buuraha; in iyadoo aan dhib badan u marin, ay dhagax biyo ka tuujin karaan, in caqabad kastoo ka hortimaada ay kaga gudbi karaan awooda fikirka wanaagsan. Waxay ka dhex arkaan wax fiican wax kastoo xun oo ku dhaca. Waxay u arkaan misiibada calaamad sheegaysa in wax fiican …
Hoggaanka sare ee dalka waxa uu qaadayo waa talaabooyin aan loo meel dayin, taxadar dheeraad ahna aan la siinin, shacbiga yaanan lagu qasbin in ay cadow u noqdaan magac dowlad, dalkana yaan lagu celin dowlad la’aan. Waana in aan cashar ka baranaa xaaladihii dalka iyo sooyaalkii nidaamyadii dalka soo maray. Dalkaan ma gaarin heerka isla xisaabtanka umana diyaarsana isla xisaabtan, haddii ay noqoto in laysla xisaabtamo waxaa muhiim in la yagleelo Guddiga xisaabi xil malaha (Gudiga dabagalka musumaasuqa) kuwaas oo ka kooban shanta beel ee dagta dalka si loogu kalsoonaado iyo shacbiga ay arkaan daahfurnaan iyo isla xisaabtamid …
Soomaaliya waxay ku taala Geeska Afrika, waxaa waqoooyi ka haya Gacanka Cadmeed oo isku xira ciriiriga Baabul Mandeb oo albaab u ah kanaalka Suweys oo isku wada xira Yurub, Afrika iyo Aasiya. Wadadaan waxaa sanad waliba mara 30,000 oo marakiib ah oo sida badeeco ugu muhiimsan sida Batroolka Khiliijka. Dhinaca bari waxaa Soomaaliya ka haya Badweynta Hindiya oy maraan maraakiib laba jeer inta marta Gacanka Cadmeed iyo Baaul-Almandab oo badeeco iyo shidaal wada. Ilaalinta iyo sugida nabad-gelyada wadooyinkaan badeed waxaa oo istaraatiijiga u ah dunida oo idil, waxa ay Soomaaliya siinaysaa ahmiyad aan la qiyaasi karin. Soomaaliya waxa daris …